Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguYesy
Uya kuyithanda indawo yethu ngenxa yendawo, kufutshane nolwandle kunye nedama lokuqubha labucala xa ufuna ukuhlala ekhaya kwaye uphumle. Indawo yam ilungile kwabatshatileyo, abantu abahamba bodwa, abahambi ngezoshishino, iintsapho (kunye nabantwana), kunye nabahlobo abanoboya (izilwanyana zasekhaya).
Ezinye zezona lwandle zidumileyo zasePuerto Rican ngaphakathi kwemizuzu. Uninzi lwabahlali kunye nabasefa kule ndawo bayakuxoxa ukuba ezinye iilwandle ezibalaseleyo zokusefa ziseAguadilla.
Eli khaya linamagumbi okulala amathathu, amabini anebhedi enkulukazi, elinye elinamawele. Kwakhona iibhafu ezi-2 ezigcweleyo kunye nephuli yabucala. Umgama omfutshane wemizuzu emi-5 ukusuka elunxwemeni.
4.93 ·Izimvo eziyi-153
Uya kuyithanda indawo yethu ngenxa yendawo, i-ambiance, kunye nephuli yabucala. Indawo yam ilungile kwabatshatileyo, abantu abahamba bodwa, abahambi ngezoshishino, iintsapho (kunye nabantwana), kunye nabahlobo abanoboya (izilwanyana zasekhaya).
Umbuki zindwendwe ngu- Yesy